I-bungalow engadini eshisayo enamachibi okubhukuda
Taravao Tahiti, îles du vent, i-French Polynesia
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Ingrid
Indawo yami yokuhlala ingaphansi kwekhilomitha ukusuka ekudleni okulula, izindawo zokudlela, kuma-hypermarkets, nokudansa. Ukutshuza, ukuhamba ngezinyawo, ukubhukuda kuyimizuzu emi-5 ngemoto futhi igagasi le-Teahupoo liqhele ngamaminithi angu-10. Uzoyijabulela indawo yohlaza lwayo oluluhlaza, ukubukwa kwayo kwentaba, ama-bungalows ajwayelekile. Uzothanda umsindo womoya ezintendeni zezandla zikakhukhunathi kanye nedamu lokubhukuda ... ongenakulibaleka. Le bungalow efakwe ekhishini ilungele imibhangqwana, izihambi ezizimele kanye nabahambi bebhizinisi.
I-bungalow itholakala endaweni ehlukile. Idizayinelwe kumodeli ye-bungalows yamahhotela kanokusho, uzothola zonke izici ngendawo yokuhlala kanokusho etholakala endaweni eluhlaza okotshani nobuhle.
4.92(61 okushiwo abanye)
I Bungalow isendaweni enhle le wezwe ophakathi enhlonhlweni (iTahiti Iti) kanye siqhingi esikhulu (eTahiti Nui), ungakwazi kalula ukufinyelela "imikhawulo" 2 kwabantu baseTahiti kokubili kuthabathela ecaleni lasempumalanga, futhi ohlangothini. Entshonalanga futhi nazo eduze kwazo zonke izitolo ngaphandle kokuba nobubi bePapeete nokuhlangana kwayo futhi ikakhulukazi isiminyaminya sezimoto!
I-bungalow itholakala endaweni yethu (2500 m2), ehlanganisa amayunithi ama-2 ngaphezu kwendlu yethu.
Ngakho-ke sikhona futhi singakwazi ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Sijwayelana nezivakashi zethu kanye nesifiso sabo sokuthula noma ukushintshana ;-)
UIngrid Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 105DTO-MT
Hlola ezinye izinketho ezise- Taravao Tahiti namaphethelo